झापामा एकिकृत समाजवादी रोज्ने जनप्रतिनिधी को को ? - Baikalpikkhabar
झापामा एकिकृत समाजवादी रोज्ने जनप्रतिनिधी को को ?
दमक,२२ भदौ / झापामा ७ जना जनप्रतिनिधिले नेकपा -एकीकृत समाजवादी रोजेका छन । नेकपा एमाले त्यागेर उनीहरुले आज जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पुगेर एकीकृत समाजवादी रोजेका हुन् ।
झापाको शिवसताक्षी नगरपालिकाका प्रवक्ता समेत रहेका ७ का वडाअध्यक्ष नविन इजमसहित समाजवादी रोजेर सनाखत गर्नेहरुमा जिल्ला समन्वय समिति सदस्य पदम लिम्बु, झापा गाउँपालिका वडा सदस्य इश्वरी दाहाल, शिवसताक्षी वार्डनम्बर ७ का वडाअध्यक्ष नविन इजम, मेचीनगर कार्यपालिका सदस्य लक्ष्मी पाख्रिन, अर्जुनधारा वडानम्बर ६ का वडासदस्य अर्जुन मेचे, अर्जुनधारा नगरपालिका ३ का वडासदस्य होम दुलाल र भद्रपुर नगरपालिका ९ का वडासदस्य कुन्जा रुचाल रहेका छन् ।
मङ्गलबार, २२ भदौ, २०७८, दिउँसोको ०३:५२ बजे